डेन्टल एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन रुपन्देहीमा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ डेन्टल एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन रुपन्देहीमा
डेन्टल एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन रुपन्देहीमा
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७६ कात्तिक २८ गते, ०९:४८ मा प्रकाशित
बुटवल—नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको २० औं राष्ट्रिय सम्मेलन रुपन्देहीमा हुने भएपछि सम्मेलनको माहोल सुरु भएको छ । सम्मेलनका लागि तुल ब्यानरलगायतका कामहरु भैरहेका छन् भने अन्य तयारीलाई समेत तीव्र पारिएको छ ।
रुपन्देहीको भैरहवा र तिलोत्तमाको कोटिहवामा हुने सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रा.डा. हेमन्तकुमार हलुवाईले जानकारी दिए ।
यही कात्तिक २९ र ३० गते दुई दिनसम्म चल्ने एसोसियसनको सम्मेलनका लागि देश तथा विदेशबाट प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरु आउने क्रम सुरु भएको छ । सम्मेलनमा नेपाल तथा नेपालबाहिरका झन्डै ३ सय दन्त चिकित्सकहरु सहभागी हुने गरी तयारी भैरहेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गर्ने २० औं सम्मेलनले घोषणपत्र जारी गर्नेछ ।
पछिल्लो समयमा दन्त चिकित्साको क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ—नयाँ अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा प्रदर्शनसमेत हुने अध्यक्ष हलुवाईले बताए । त्यसको अलावा सम्मेलनमा दन्त चिकित्सकहरुबीच विचार विमर्श, अनुभव आदान—प्रदान, एवं अन्तरक्रियाद्वारा दन्त चिकित्सा सम्बन्धि ज्ञान र सीपलाई अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरु हुने उनले बताए । ‘कार्यक्रममा दन्त चिकित्सा सम्बन्धि अत्याधुनिक उपकरण एवं औषधिजन्य पदार्थहरुको वृहत प्रर्दशनी हुनेछ,’ उनले भने, ‘दन्त चिकित्सामा प्रयोग हुने नविन प्रविधि, यन्त्र, उपकरण र औषधिजन्य पदार्थ अत्यन्त सुलभ दरमा उपलब्ध समेत हुनेछ ।’
सम्मेलनमा ६४ कार्यपत्र, २५ लाख खर्च
सम्मेलनमा दन्त चिकित्सा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाउन वृहत छलफल हुनेछ । विषय विज्ञहरुले तयार पारेका विभिन्न शिर्षकमा ६४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष डा. हलुवाईले बताए ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० तथा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ लाई सघाउ पुग्ने गरी सम्मेलन गर्न लागिएको उनले बताए । यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुगोस भन्ने उद्धेश्यले वुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वारलाई सम्मेलनको लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरिएको आयोजक संस्थाका सचिव डा. कलितराज जोशीले बताए ।
सम्मेलनमा करिब २५ लाख खर्च हुने आयोजकले जनाएका छन् ।